Hafatry ny filoha ( Oriela) – FJKM Ambohimamory
Accueil/ORIELA/Hafatry ny filoha ( Oriela)
Hafatry ny filoha .
« Indro havaoziko ny zavatra rehetra » Apo 21,5b .
Izany teny fanevan’ny fankalazana ny faha 150 taonan’ny fitandremana FJKM AMBOHIMAMORY MALALA ORIMBATO izany no sori-dàlana indray ho entin’ny antoko mpihira ORIELA miaina sy mandinin-tena taorian’ny fahavitan’ny fifidianana ny birao vaovao ny 02 martsa 2019 lasa teo. Izany foto-kevitra izany no ho entina miainga indray sy handaminana ny fomba fiasa rehetra eto anivon’ny antoko mpihira ka hiandrandrana fanavaozana sy fandrosoana amin’ny lafiny rehetra ary antenaina ihany koa fa hitondra vokatra tsaratsara kokoa eo amin’ny fiainan’ny antoko mpihira. Mahafaly anay araka izany ny manolotra sahady na dia vao enim-bolana aza izay no tena niasan’ny birao vaovao ny tatitra moraly , asa ary ny ara-bola izay efa niainanay sahady .
Rehefa tafajoro ny birao vaovao ny 02 martsa 2019 dia niatrika ny asa avy hatrany ka niezaka nandinika ireto zavatra manaraka ireo :
Inona ny zavatra tsara efa niainan’ny teo aloha ka mbola azo tohizana tsara ?
Inona ny zavatra tsy dia mety na tokony ho esorina na hatsaraina na tena ratsy ka tsy mahasoa ny fikambanana?
Vokatr’ireo fandinihina ireo dia nitondra fanatsarana sy fanavaozana mihintsy teo amin’ny fomba fiasa ny birao ka nametraka ireto vina manaraka ireo ho vinan’ny taom-piasana 2019-2023.
Oriela tia vavaka
Oriela mifankatia sy mifanaja
Oriela mitrandraka ny fanomezam-pahasoavana
Oriela miaina ny mangarahara tanteraka.
Araka ny foto-kevitra izay efa voalaza teny ambony dia marina fa mety efa nisy tao anatin’ny antoko mpihira ireo vina ireo saingy hita ho goragora ihany ny fampiharana sy ny fiainana azy ka nasiana fomba fiasa matotra kokoa mba tsy ahatonga ireny vina ireny ho lasa soratra sy tanjona fotsiny .Somary manahirana ihany ny nitondra ny fanovana satria misy ireo izay efa zatra ny fomba teo aloha ka somary sahirana tamin’ny fandraisana ny fomba fitantanana vaovao.
Ny fampiharana rehetra eo anivon’ny antoko mpihira Oriela manombaka izao dia tsy mba misy fanerena intsony fa hialohavana fampianarana sy fanazavana ara-tsoratra Masina avokoa mialoha ny hampiharana azy mba ho azon’ny tsirairay ny antony hanaovana izany ary hahamora ny famparana ihany koa .
Oriela tia vavaka.
Ampianarina eto anivon’ny antoko mpihira Oriela fa na dia ny hira aza no tena fiainany dia tsy maintsy ny fifandraisana amin’Andriamanitra no voalohandaharana amin’ny kristianina tsirairay.
Amin’ny maha FJKM ny Oriela dia tsy maintsy ny ny tenin’Andriamanitra no lalam-panorenana hitondrana ny fiainan’ny tsirairay sy ny fikambanana.
Araka izany dia manome lanja lehibe ny tenin’Andriamanitra ny fikambanana amin’izay zavatra rehetra atao fa tsy mandeha amin’ny sain’olombelona fotsiny izay tsy tonga lafatra .
Omena lanja ihany koa ny fampianarana ny tenin’Andriamanitra eto amin’ny fikambanana izay hiarahana amin’ireo tompon’adraikitra afaka manatanteraka izany . Hita fa efa manomboka mahazo ny zavatra tiana hitaritana azy ny mpikambana ary liana amin’izany ihany koa .
Orilea mifankatia sy mifanaja.
Hita ho tsy ampy sy tsy misy mihintsy aza indraindray ny fifankatiavana sy ny fifanajana teo amin’ny mpikambana sasantsasany teto anivon’ny fikambanana ka nitadiavan’ny birao hevitra sy tetika izany satria efa niteraka olana maro tato ihany koa .
Nisy maromaro izy ireny tao toy ny :
Fanaovana vava tsy ambina sy tsy am-piheverana
Fiheveran’ny mpikambana sasany ho ambony sy tsy azo fehezina
Fifampialonana sy ny fanambanimbaniana.
Fanindrahindrana tafahoatra ny resa-bola .
Fanavakavahana amin’ny endriny samihafa .
Isaorana lehibe ny Tompo fa efa tsy hita taratra intsony eto anivon’ny fikambana intsony izany ary tena mahafaly ny mpikambana ary mampirisika koa ny sasany hiverina indray.
Oriela mitrandraka ny fanomezam-pahasoavana.
Ezahina tena hahazo tombony ny tsirairay amin’ny fandalovany ato amin’ny fikambanana ka tena hampiseho am-pitiavana sy hitondra izay fanomezam-pahasoavana nomen’ny Tompo azy mba hampandrosoana ny fikambanana . Omena sehatra malalaka mihintsy ny tsirairay amin’izany mba hisian’ny fivelarana sy ny fahatsapany fa manana fahafahana tanteraka izy ao anatin’ny fikambanana . Maro ny fanomezam-pahasoavana izay hita ao anatin’ny fikambanana ankehitriny ary tena mazoto sy finaritra ny mpikambana maneho izany. Nozaraina vaomiera ny mpikambana araka izany mba hampahomby kokoa ny fomba fiasa .
Oriela miaina ny mangarahara
Isan’ny lesoka lehibe nitondra zavatra ratsy ny tsy fisian’ny mangarahara loatra teo aloha ary tena novain’ny birao vaovao tanteraka araka izany ny fomba fiasa sy fanehoana izany .
Natsofoka any anaty fitsipika ny fomba fanapahana hevitra vaovao eo anivon’ny fikambanana mba tsy hisian’ny teny midina fotsiny fa mba tena andraisan’ny rehetra anjara . Nalaina tahaka tamin’ny Fiangonana reniny izany fomba fiasa izany dia ny fivorian’ny birao / filoham-baomiera / fivoriam-be . Nefa misy ihany koa ny fivoriam-be / vaomiera / birao.
Tsy azo ekena intsony araka izany ny olona mandidy sy mibaikobaiko araka izay tiany sy heveriny .
Nandraisana fepetra matotra sy entitra ny fomba fitantanam-bolan’ny fikambanana ary mangarahara avokoa ny asa rehetra amin’ny fitadiavam-bolan’ny fikambanana toy ny buvette , …sns. Nasiana fanamarinana mazava avokoa ny vola miditra sy mivoaka rehetra ary soniavin’ny iray amin’ny filoha izany vao azo ekena . Manao tatitra mazava isam-bolana na isaky ny roa volana amin’ny mpikambana ny birao mba hisian’ny fifampitokisana .
Tsapa ho nanafaly sy nahavolombolo ny maro indray izany fomba fiasa izany .
Eo am-pandinihina ny fitsipika mifehy ny fikambanana ny birao ankehitriny ary mandrindra izany ho azo avoaka ho boky mba hahatonga azy ho azo hiainana sy ho hampiarina fa tsy ho lasa tahiry fotsiny . Rehefa vita izany dia mbola hangatahina fanakatoavana any amin’ny Mpitandrina sy ny biraom-piangonana izay vao ho ampiasaina mazava eto anivon’ny fikambanana .
Manana anjara adidy amin’ny fanohanana ny fanitarana ny Fiangonana ihany koa ny antoko mpihira Oriela ary mavitrika amin’izany ny mpikambana .
À propos de l'auteur : RANAIVOSON Harinirina